Nlegharị lọ Ọrụ | Xiamen Mgbe-ebi akwụkwọ Finishing ọnọde Co., Ltd.
Kwes Laminating Film Nsukka
Mkpuchi Laminating Manufacturer
Corona L aminate Nkiri Roll
Roll Laminating Nkiri soplaya
Jumbo Roll Laminating Nkiri
Roll tụọ ngwaahia
Akwa-agba extrusion mkpuchi laminating edoghi maka amị kwes laminating film na 850MTs ikike kwa ọnwa.
Advanced oru isi akụkụ na-ekwe nkwa ọzọ symmetric ọkpụrụkpụ na elu adhesion ike.
Corona mesoro mpịakọta laminate, otu ma ọ bụ akụkụ abụọ corona bara uru ruo dynes 52.
Ezigbo mpịakọta mpịakọta na rewinding nke BOPP Kwesịrị Laminating Nkiri.
jumbo mpịakọta laminating flm spplier, thermal laminating fim, kenkowaputa na Mat, ahaziri jikoro
Matt na-apụta na ike ahaziri na obosara na ogologo.
Xiamen Mgbe-ebi akwụkwọ Finishing ọnọde Co., Ltd. ka ọ dị ugbua ịkekọrịta-na-ejide eriri mkpuchi extrusion dị iche iche na igwe iri na-agbakọta maka ịmịpụta mpịakọta plastik nke ihe nkiri ọkụ na-ekpo ọkụ, na-ewepụta 750MTs kwa ọnwa.
Iji hụ na-eje ozi elu àgwà mkpuchi laminating film, anyị extrusion edoghi na-kwadoro na ihe ndị kasị elu oké egwu oru akụkụ ahụ mapụtara na-ekwe nkwa ihe kasị mma symmetrical mkpuchi ọkpụrụkpụ na elu bonding adhesion ike.
Ọtụtụ mgbe, tupu enwetaghachi ma ọ bụ gbazee anyị, anyị na-agba laminated na-akpọnwụ maka otu ụbọchị mgbe a na-ete gị site na nrapado mama nke EVA. Usoro a na - ewusi uru nnabata ya ike ma mee ka laminate na - apụta karịa ka ọ na - ebelata.
Ozi ndị ọzọ gbasara lamination ọkụ, ọ bụ usoro lamination nke anyị ji eme laminates n'ihi mmetụta nke okpomọkụ. Anyị na-akpọkwa ya okpomọkụ ma ọ bụ lamination akọrọ. A na-arụ ọrụ ihe nkiri ndị a larịị site na usoro mkpuchi extrusion na n'otu akụkụ nke ihe nkiri ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ihe nkiri, nke bụ BOPP + EVA ma ọ bụ PET + EVA.
Kwes laminating gafere kpụ ọkụ n'ọnụ mpịakọta ma ọ bụ laminator. Anyị ga-etinye ụfọdụ ezi uche mgbali na lamination na-eme. Akọrọ lamination na-na-ọzọ bara uru ruru ya uru na mmiri laminating. Anyị ekwesịghị itinye ụfọdụ nyagide ọzọ maka laminate.
Mmasị na n'elu?
Biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị:
Ihe eji ekpo ọkụ, Hot Foil, Hot Foil zọ, okpomọkụ lamination film, ndị na-emepụta ihe nkiri bopp metallized, polyester ihe nkiri,